TALE JENERALIN’NY FANDRAHARAHANA NY FONJA : « Tsy andraikitry ny mpitsabo no miandry ny voafonja » – Free News
lundi, 18 octobre 2021 - 8:37
Nitondra fanazavana ny Tale Jeneralin'ny Fandraharahana ny Fonja.
Accueil/Politika/TALE JENERALIN’NY FANDRAHARAHANA NY FONJA : « Tsy andraikitry ny mpitsabo no miandry ny voafonja »
Rehefa nalefa nody raha notanana nandritra ny 48ora, ny asabotsy 09 oktobra 2021 teo ny Profesora Auberlin Rakototiana sy ny Dokotera Rakotosamimanana Jean Marie, Directeur Adjoint Technique na DAT, izay ampangaina ho niray tsikombakomba tamin'ny fampandosirana ny gadra marary Eddy Maminirina, dia omaly alatsinainy 11 oktobra no natolotra teo anivon'ny fampanoavana tetsy Anosy izy mirahalahy ireto.
Lucien R. il y a 6 jours
Tsy nitsoaka ny Hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) i Maminirina Eddy, fantatry ny maro amin’ny anarana hoe “Eddy Bois de Rose”, araka ny fanazavana nentin’ny tale jeneralin’ny Fandraharahana ny fonja (DGAP) Ranaivo Andriamaroahina Tovonjanahary omaly Alatsinainy 11 oktobra. Notsiahiviny fa ny 13 febroary 2019 no voasambotra i Eddy Bois de Rose. Naiditra am-ponja vonjimaika rehefa avy niakatra Fampanoavana. Noho ny toe-pahasalamany dia nanaraka fitsaboana teny amin’ny Hopitaly HJRA ny tenany. Aretina efa nitaiza azy efa ela no nahazo azy, araka ny voalazan’ny mpitsabo, dia ny fahasemporana. Araka izany, mila “oxygène” ny tenany hahafahana mitsabo azy, ka antony tsy maintsy nitondrana azy teny anivon’ny Hopitaly.
Notsindrian’ity tomponandraikitra ity fa tsy maintsy mpiandry fonja hatrany miambina ireo voafonja mivoaka ety ivelan’ny fonja. Nifandimbidimby ireo mpiandry fonja niambina tetsy amin’ny hopitaly HJRA, izay nandeha tsiroaroa araka ny fanazavana. Misy fotoana ny eo anivon’ny fandraharahana ny fonja no manao fidinana ifotony eny an-toerana manara-maso ity voafonja ity, ary tsy mahita olana fa eo avokoa na ireo mpiambina, na i Eddy Bois de Rose. Nisy fotoana ihany koa anefa ny eo anivon’ny tribonaly nanao fitsirihana, ka tamin’izany no tsy nahitana an’ity voafonja ity tao amin’ny toerana tokony hisy azy, raha toa ka hita teo hatrany ireo mpiambina roa lahy. Teo no nisy filazana fa tafatsoaka izy. Notanana avy hatrany, noho izany, ireo mpiandry fonja. Teo ihany koa anefa no nantsoina i Eddy Bois de Rose ary tonga tao an-toerana ka dia notanana avy hatrany ihany koa. Niaraka nentina teny amin’ny Polisy avokoa, izy ireo, avy eo.
Ny Fitsarana no tompon’ny teny farany
Manoloana ity tranga ity, nilaza ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja fa tsy andrakitry ny mpitsabo mihitsy no miambina ny voafonja. Mitsabo no asan’ny Dokotera. Andraikitry ny mpiandry fonja kosa no miambina ny voafonja. Mahakasika ity raharaha ity, noho izany, nambarany fa mety teo amin’ireo mpiandry fonja miisa roa niambina tamin’io fotoana io no nisy tandrevaka, nahatonga ny voafonja tsy teo amin’ny toerana tokony hisy azy. Na izany aza anefa, nolazainy fa ny Fitsarana irery ihany no tompon’ny teny farany mahakasika ireo olona mety ho voasaringotra ireo.
Tsiahivina fa nalefa nody rehefa notanana nandritra ny 48ora, ny asabotsy 09 oktobra 2021 teo ny Profesora Auberlin Rakototiana sy ny Dokotera Rakotosamimanana Jean Marie, Directeur Adjoint Technique na DAT, izay ampangaina ho niray tsikombakomba tamin’ny fampandosirana ny gadra marary Eddy Maminirina. Omaly alatsinainy 11 oktobra no natolotra teo anivon’ny fampanoavana etsy Anosy izy mirahalahy ireto. Fantatra ihany koa fa niakatra eny anivon’ny Fampanoavana i Eddy Maminirina, izay notanana hatrany tao amin’ny Renseignement 1er étage Anosy.
Tetsy ankilany, ireo Mpianatra mpitsabo sy mpianatra mpandidy rehetra dia manao fitokonana tsy handray marary, ankoatran’ireo marary tena tsy maintsy raisina mihatra aman’aina. Ny Sendikan’ireo mpampianatra mpitsabo ihany koa dia nanao fanambarana ny hitakiana ny amoahana ireto mpitsabo ireto.
RAHARAHA “EDDY BOIS DE ROSE”
Hitohy anio ny famotorana ny Pr Auberlin Rakototiana sy ny Dr Rakotosamimanana J.M
Araka ny vaovao voaray farany omaly, dia afaka nody tany anivon’ny fianakaviany avy ireo mpiasan’ny fahasalamana miisa roa voasaringotra tamin’ny raharaha firaisana tsikombakomba tamin’ny fampitsoahana ny voafonja fantatra amin’ny anarana hoe “Eddy Bois de Rose”. Isan’izany ny Profesora Auberlin Rakototiana sy ny Dokotera Rakotosamimanana Jean Marie. Hitohy anio, araka izany, ny famotorana azy mirahalahy ireto. Samy miandry fatratra ny ho vokatr’ity fanadihadiana ity ny mpanara-baovao rehetra. Tsy mbola fantatra kosa ny momba ireo mpiandry fonja voasaringotra tamin’izao raharaha izao. Mitohy ny fanadihadiana…
DIAN’NY FILOHA ANY FRANTSA: Tombanana ny hihaonany amin’ny Filoha Emmanuel Macron
RAHARAHA ANY ATSIMO : “Tsy voatery ho marina foana ny vaovao avoakan’ny mpanao Gazety vahiny”
FANJAKANA MALAGASY: Handray didim-panjakana momba ny famoahana sy famerenana vola vahiny
Prefen’Antananarivo : Tsy maintsy andraisana fepetra ny « Miara-manonja »
FIFIDIANANA KAOMINALY TANY NOSY BE: Naato ny fampiharana ny didy navoakan’ny Filankevi-panjakana